တကူ သားလေး ရဲ့ နည်းပညာ စုစည်းမှု: Android User တွေအတွက် Player ကောင်းကောင်းလေး - Wave Control Pro v2.84 Apk
Android User တွေအတွက် Player ကောင်းကောင်းလေး - Wave Control Pro v2.84 Apk
Androdi Phone ပေါ်မှာ Viedo နဲ့ Music တွေကို ကြည့်နိုင်ဖို့နားဆင်နိုင်ဖို့အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ Player လေးတစ်ခု တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ ။ Video နဲ့ Audio Format ပေါင်းများစွာကို Support လုပ်ပေးနိုင် ပါတယ်ဗျာ။ Phone တစ်လုံးမှာ ရှိထားသင့်တဲ့ Player တစ်ခု ဖြစ်တဲ့အတွက် ဆောင်ထားစေချင်ပါတယ်ဗျာ။ Android OS 2.2 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
What's in this version : (Updated : Oct 12, 2013)
Crash Fixes for App in Background and swiping from Recent Apps
Note3fixes for UI errors
New Spanish Translation, should make more sense now. Thanks Rodrigo!
Added Note3sensor to Sensor Setup
Fixed sensor timing not displaying properly in the setup area
Posted by အောင်မျိုး at 12:17 AM